TALE JENERALY VAOVAO NY ENMG : Veloma hatreo ry mpanao risoriso | déliremadagascar
NICOLAS DUPUIS: Nitatitra ny resaka nataony tamin’ny Prezidàn’ny repoblika
ISTS-CRDS: Ny anjara toeran’ny asa sosialy amin’ny fampandrosoana
SOLOMBAVAMBAHOAKA MASY GOULAMALY : « Tokony misy ny mpanohitra ato amin’ny Antenimierampirenena»
AFRIKA ATSIMO: Nizara traikefa tamin’ireo vehivavy malagasy solombavambahoaka
ANOR TANY AMIN’NY FARITRA SAVA SY DIANA: Tratra ny tanjona
HYPNOSE MEDICALE: Azo ampiasaina amin’ny fitsaboana
TALE JENERALY VAOVAO NY ENMG : Veloma hatreo ry mpanao risoriso
Socio-eco	 26 avril 2019 R Nirina
Notanterahina ny 26 aprily 2019 ny fifamindram-pahefana teo amin’ny tale jeneralin’ny sekolim-pirenena manofana mpitsara sy mpirakidraharaha (ENMG), Rakotoarisoa Miandantsata Indriamanga sy ny mpandimby azy Ramarolahy Haingonirainy Anthony. Nanatrika izany ny avy ao amin’ny ministeran’ny fitsarana izay nisoloan’ny sekretera jeneraly tena. Nampahafantatra ny vina ho tanterahiny mandritra ny fotoam-piasany ny tale jeneraly vaovao tamin’io fotoana io. Nomarihiny ity teknisiana ity fa mifanaraka amin’ny politikam-panjakana amin’ny ankapobeny izany.
Vina fohy ezaka ho tanterahina ny fananganana paikady vaovao momba ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG. « Mbola hisy ny fikaonan-doha hamolavolana izany satria be dia be pitsopitsony mila harenina », hoy izy. Nambarany fa olana goavana ao amin’ny sekoly ny fisian’ny “intervention” ataon’ny manam-pahefana isaky ny “concours” mba hampidirana mpianatra. Eo ihany koa ny kolikoly. Nilaza izy fa tsy handray vola na Ariary aza amin’ny fampidirana mpianatra ao amin’ny ENMG. Niteny ny mpiasa sahady izy nandritra ny famindram-pahefana fa tsy azo ampiasaina hanaovana kolikoly ny anarany. Mitaky fanovàna toe-tsaina miainga any amin’ny farany ambany ka hatrany ambony anefa izany, hoy izy. Azo atao ihany koa ny mandà ny “intervention”. Mitaky fiarovana amin’ny tomponandraikitra isan-tsokajiny anefa izany mba tsy hanjakan’ny “lavan-tanana”, raha ny nambarany.
Vina antenantenany kasaina ho atao mandritra ny fotoam-piasany ihany koa ny fanohizana ny fitadiavana fiarahamiasa amin’ireo mpiara-miombona antoka. Mpikambana ao amin’ny SADC, COMESA, COI i Madagasikara. Ny ankamaroan’ireo firenena mikambana ao dia mampiasa ny teny anglisy ka sahirana ny mpitsara eto amintsika. Mikendry ny hampivelatra ny fiarahamiasan’ny sekoly amin’ny firenena mampiasa ny teny anglisy ny tenany mba ahafahan’ireo mpampiofana hanamafy ny traikefany amin’ny lalàna anglisy (common law) sy mandefa ireo mpianatra sangany (major) hanao “stage”.
Vina lavitr’ezaka ho atomboka ny fananganana foto-drafitr’asa lehibe manara-penitra ho an’ny ENMG tahaka ireo sekoly ambony rehetra eto an-toerana sy any ivelany. Ho hita ao anatin’ny foto-drafitr’asa ny toerana fampiofanana, ny trano ho an’ny mpianatra sy ny mpampianatra, ny toerana fandraisam-bahiny ohatra rehefa misy mpampiofana avy ivelany, zaridaina, “parking”… Azo tanterahina tsara izany, tsy voatery ny fanjakana no hiantoka ny fanamboarana iray manontolo fa azo atao ny mitady fiarahamiasa, ny fiarahamientan’ny mpitsara, hetsika fitadiavam-bola sy ny maro hafa. Marihina fa tao anatin’ny andiany voalohany nivoaka tao amin’ny ENMG ny tale jeneraly Ramarolahy Haingonirainy Anthony.
NICOLAS DUPUIS: Nitatitra ny resaka nata...
ISTS-CRDS: Ny anjara toeran’ny asa sos...
SOLOMBAVAMBAHOAKA MASY GOULAMALY : « To...
AFRIKA ATSIMO: Nizara traikefa tamin&rsq...
ANOR TANY AMIN’NY FARITRA SAVA SY DIAN...
HYPNOSE MEDICALE: Azo ampiasaina amin’...
LALANA NIHOTSAKA ETSY SOANIERANA: Natomb...
SANTE ET DEVELOPPEMENT: Reprises des gre...
CYBERCRIMINALITE: Misokatra ny varavaran...
SUPERCODEURS: Sady vita ny vakansy no mi...
NICOLAS DUPUIS: Nitatitra ny resaka nataony tamin’ny Prezidàn’ny repoblika 22 août 2019
ISTS-CRDS: Ny anjara toeran’ny asa sosialy amin’ny fampandrosoana 22 août 2019
SOLOMBAVAMBAHOAKA MASY GOULAMALY : « Tokony misy ny mpanohitra ato amin’ny Antenimierampirenena» 21 août 2019
AFRIKA ATSIMO: Nizara traikefa tamin’ireo vehivavy malagasy solombavambahoaka 21 août 2019
ANOR TANY AMIN’NY FARITRA SAVA SY DIANA: Tratra ny tanjona 19 août 2019
HYPNOSE MEDICALE: Azo ampiasaina amin’ny fitsaboana 19 août 2019
LALANA NIHOTSAKA ETSY SOANIERANA: Natomboka tamin’ny “tagnamaro” ny asa fanamboarana 19 août 2019